Nneɛma foforo a Nehemia de totoo yiye (1-31)
Wɔde ntotoso du du bae (10-13)
Ɛnsɛ sɛ wogu Homeda ho fĩ (15-22)
Ɔkaa wɔn anim sɛ wɔawareware ananafo (23-28)
13 Saa da no, wɔkenkan Mose nhoma no maa ɔman no tee;+ na wohui sɛ wɔakyerɛw wom sɛ ɛnsɛ sɛ Ammonfo ne Moabfo+ ba nokware Nyankopɔn no asafo mu da,+ 2 efisɛ wɔamfa aduan* ne nsu ammehyia Israelfo no; mmom, wɔkɔbɔɔ Baalam paa sɛ ɔnnome wɔn.+ Nanso yɛn Nyankopɔn maa nnome no dan nhyira.+ 3 Bere a wɔtee Mmara no ara pɛ, wofii ase yiyii ananafo* nyinaa fii Israelfo no mu.+ 4 Ansa na wɔreyɛ eyi no, na Eliasib+ a ne busuani ne Tobia+ no na ɔyɛ ɔsɔfo a ɔhwɛ yɛn Nyankopɔn fi adekora adan* no so.+ 5 Osiesiee adekoradan* kɛse bi maa no; ɛhɔ na kan no na wɔde aduan afɔre, ɛhyɛ,* ne nneɛma foforo gu; ɛhɔ nso na aduan ne bobesa foforo ne ngo+ so ntotoso du du* a wɔahyɛ sɛ wɔmfa mma Lewifo,+ nnwontofo, ne apon ano ahwɛfo no wɔ; ná asɔfo no kyɛfa nso ka ho.+ 6 Saa bere no nyinaa na minni Yerusalem, efisɛ Babilon hene Artasasta+ ahenni afe a ɛto so 32 mu no,+ mekɔɔ ɔhene nkyɛn; akyiri yi, mesrɛɛ kwan fii ɔhene nkyɛn sɛ mepɛ sɛ mitu kwan kakra. 7 Afei mebaa Yerusalem, na mibehuu adebɔne a Eliasib+ ayɛ. Ná wasiesie adekoradan bi ama Tobia+ wɔ nokware Nyankopɔn no fi no adiwo. 8 Ɛyɛɛ me yaw paa, enti miyiyii Tobia dan mu nneɛma nyinaa fii adekoradan no mu* tow guu abɔnten. 9 Miwiei no, meka ma wɔtew adekora adan* no nyinaa ho, na mesan de nokware Nyankopɔn no fi nneɛma+ ne aduan afɔre ne ɛhyɛ*+ no guu hɔ. 10 Mibehui nso sɛ na wɔmfa Lewifo+ no kyɛfa mma wɔn+ ma enti Lewifo ne nnwontofo a na wɔyɛ adwuma no aguanguan kɔ; obiara kɔ n’asaase so.+ 11 Ɛnna m’ani beree asoafo no so,+ na mibisaa wɔn sɛ: “Dɛn nti na moabu mo ani agu nokware Nyankopɔn no fi so?”+ Afei meboaboaa wɔn ano de wɔn gyinagyinaa wɔn gyinabea bio. 12 Na Yuda nyinaa de hwiit* ne bobesa foforo ne ngo so ntotoso du du+ baa adekora adan no mu.+ 13 Afei mede adekora adan no hyɛɛ ɔsɔfo Selemia, ɔkyerɛwfo Sadok, ne Pedaia a ɔyɛ Lewini no nsa, efisɛ na wobu mmarima yi anokwafo; Matania ba Sakur ba Hanan na na ɔboa wɔn. Ná wɔn adwuma ne sɛ wɔbɛkyekyɛ wɔn nuanom kyɛfa ama wɔn. 14 O me Nyankopɔn, kae me+ wɔ eyi ho, na mma wo werɛ mmfi ɔdɔ a enni huammɔ a me Nyankopɔn fi ne ɛho nnwuma nti mada no adi no.+ 15 Saa bere no, mihui sɛ nkurɔfo a wɔwɔ Yuda reyɛ bobesa* Homeda,+ na na wɔakyekyere hwiit asoasoa mfurum a wɔde reba. Ná wɔde nsã, bobe, borɔdɔma, ne nnesoa ahorow nyinaa bi reba Yerusalem Homeda;+ na mebɔɔ wɔn kɔkɔ wɔ saa da a na wɔde tɔn nneɛma no ho.* 16 Ná Tirofo a wɔte kurow no mu no de mpataa ne aguade ahorow nyinaa bi ba bɛtɔn no Homeda+ ma nnipa a wɔte Yuda ne Yerusalem. 17 Enti m’ani beree Yuda mpanyimfo no so, na mibisaa wɔn sɛ: “Adebɔne bɛn na moreyɛ yi? Moagu Homeda no ho fĩ! 18 Ɛnyɛ eyi ara na mo agyanom yɛe a yɛn Nyankopɔn de mmusu yi nyinaa baa yɛne kurow yi so? Afei hwɛ, moda so ara regu Homeda no ho fĩ+ ama abufuhyew no ayɛ kɛse wɔ Israel so.” 19 Enti bere a Homeda reyɛ adu a esum reba wɔ Yerusalem kurow apon ano no, mekae sɛ wɔntoto apon no mu. Mesan kae sɛ mma wommmuebue, gye sɛ Homeda no atwam ansa; na mede m’ankasa m’asomfo no bi gyinagyinaa apon no ano na obiara amfa adesoa biara amma mu Homeda. 20 Ɛno nti aguadifo ne adetɔnfo a wɔtɔn aguade ahorow nyinaa bi no bɛdaa Yerusalem apon no akyi pɛnkoro ne ne mprenu so. 21 Ɛnna mebɔɔ wɔn kɔkɔ kae sɛ: “Adɛn nti na modeda ɔfasu no akyi? Sɛ moyɛ saa bio a, mɛyɛ mo ade.” Efi saa bere no, wɔamma hɔ Homeda bio. 22 Na meka kyerɛɛ Lewifo no sɛ wonnwira wɔn ho daa, na wɔmmra mmɛwɛn apon no na wɔnyɛ Homeda no kronkron.+ Eyi mu nso, O me Nyankopɔn, kae me, na hu me mmɔbɔ sɛnea wo dɔ bebrebe a enni huammɔ no te.+ 23 Saa bere no, mibehui nso sɛ Yudafo no bi awareware Asdodfo+ ne Ammonfo ne Moabfo+ mmea.+ 24 Wɔn mma no nso, na wɔn mu fã ka Asdodfo kasa, na na wɔn mu fã ka aman foforo so kasa; wɔn mu biara nni hɔ a na otumi ka Yudafo kasa. 25 Enti m’ani beree wɔn so, na medomee wɔn, na mmarima no bi nso mebobɔɔ wɔn;+ mitutuu wɔn nwi na mema wɔkaa Onyankopɔn ntam, na mekae sɛ: “Mommma mo mma mmea nnware wɔn mma mmarima, na wɔn mma mmea nso munnnye wɔn aware mmma mo mma mmarima, na mo ankasa nso monnware wɔn.+ 26 Ɛnyɛ saa nneɛma yi ara na ɛmaa Israel hene Solomon yɛɛ bɔne? Ná ɔhene biara nte sɛ ɔno+ amanaman no mu; ne Nyankopɔn dɔɔ no,+ ma enti Onyankopɔn de no sii Israel nyinaa so hene. Ɔno mpo, mmea ananafo na wɔma ɔyɛɛ bɔne.+ 27 Enti ɛyɛ nwonwa paa sɛ moawareware aman foforo so mmea de ayɛ bɔne kɛse yi de ato yɛn Nyankopɔn mmara.”+ 28 Ná ɔsɔfo panyin Eliasib+ ba Yoiada mma no mu baako+ abɛyɛ Sanbalat+ a ofi Horon no asebarima. Enti mepam no. 29 O me Nyankopɔn, mfa wɔn ho nkyɛ wɔn, efisɛ wɔagu asɔfodi ne asɔfodi apam+ ne Lewifo+ no ho fĩ. 30 Na midwiraa* wɔn ho fii amanaman mufo nneɛma a wɔde guu wɔn ho fĩ no ho, na mede asɔfo ne Lewifo no sisii wɔn nnwuma so, obiara ne n’adwuma;+ 31 anyina ne aba a edi kan nso, meyɛɛ nhyehyɛe maa wɔde bae+ wɔ ne bere mu. O me Nyankopɔn, kae me ma ensi me yiye.+
^ Anaa “firamanfiramanfo.”
^ Anaa “adidibea.”
^ Nt., “wɔretiatia amoa a wokyĩ nsã wom no mu.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “mebɔɔ wɔn kɔkɔ saa da no sɛ ɛnsɛ sɛ wɔtɔn nneɛma.”
^ Anaa “metew.”